I-iphone 12 kunye ne-iphone 12 pro esemthethweni yecala lesikhumba lifumana isaphulelo esinqabileyo eamazon
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 Pro ityala lesikhumba elisemthethweni lifumana isaphulelo esinqabileyo eAmazon
I-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 Pro ityala lesikhumba elisemthethweni lifumana isaphulelo esinqabileyo eAmazon
Sonke siyazi ukuba izixhobo zeApple kunqabile ukuba zifumane isaphulelo kumaxabiso abo epremiyamu, kodwa ngoku, ngaphantsi kweeveki ezimbini ngaphambili Inkulumbuso 2021 , IAmazon isothusa ngexabiso elinqabileyo lamaxesha onke elisezantsi lesikhumba seMagSafe ye-iPhone 12 kwiBaltic Blue. Ukuba uyangxama, eli tyala le-premium elivela kwi-Apple linokuba lelakho ngesaphulelo se-8%.
Esi sivumelwano senzelwe kuphela umbala weBaltic Blue, eminye imibala kwivenkile ethengisa ukuthengisa ngexabiso eliqhelekileyo le- $ 59. Nangona kunjalo, imeko yeBaltic Blue lukhetho olukhulu njengoko umbala wayo ongabonakaliyo kunye nombala weprimiyamu unokubonakala ulungile ngayo nantoni na. Ungayisebenzisa kwi-iPhone yakho ye-12 okanye i-iPhone 12 Pro, njengoko ubukhulu bezi fowuni zimbini zifana.
Ityala linenkxaso yeMagSafe, ke iyakwazi ngokulula ukungena kwi-iPhone 12 yakho ukuze ibambe ngokukhuselekileyo, ngelixa kwangaxeshanye, inikezela ngokhuseleko kwimikrwelo nakumathontsi. Unokuhlawulisa ngaphandle kwefowuni i-iPhone yakho ngaphandle kokuba uyisuse imeko, engeyonyani kwamanye amatyala wesikhumba.
Nje ukuba uxhobise i-iPhone 12 okanye i-iPhone 12 Pro yakho ngethoni entle yesikhumba, unokujonga kwakhona ukhetho lwethu Ezona zinto zilungileyo ze-iPhone 12 MagSafe ngezinto ezipholileyo ngakumbi ukuze uxhamle kwiimagnethi zeMagSafe.
Thatha eyakho ukusuka apha:
Ityala leApple lesikhumba kunye neMagSafe (ye-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 Pro)
$ 5 isaphulelo (8%) Thenga kwiAmazon
Qaphela i-8 yangaphambi koku-oda
Umhla wokukhutshwa kwe-galaxy 3
ukulinda okungacacanga kunye nokulinda okucacileyo
I-Fitbit & apos; eyona mbangi ilungileyo ye-Apple Watch kodwa iya ngokusemthethweni ecaleni kweVersa 3 kunye ne-Inspire 2
I-T-Mobile kunye neeapos zokuhamba kwe-Un-carrier zamva nje zibandakanya iifowuni zasimahla ze5G kunye nophuculo lwesicwangciso esingenamda kubo bonke
Isixhobo se-Samsung Galaxy shushu ngokukhawuleza kunye nokukhupha ibhetri? Zama oku kulungiswa
Ezi smartphones ze-Samsung ziya kulungela uhlaziyo lwe-Android 12
I-Samsung Galaxy S5 kunye neLollipop vs Galaxy S5 kunye neKitKat: Thelekisa i-UI
UGoogle Chrome ufumana into ebalulekileyo eluncedo kwi-Android
I-Samsung Galaxy S21 128 GB vs 256 GB vs 512 GB: yeyiphi oyifumanayo?
I-OnePlus 8 Pro vs OnePlus 8